I-Executive Loft endaweni ye-premium - I-Airbnb
I-Executive Loft endaweni ye-premium
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Silvania
U-Silvania Ungumbungazi ovelele
I-loft isendaweni ekhethekile yedolobha esakhiweni sesimanje nesisha, eduze nendawo yezohwebo ehamba phambili edolobheni, futhi iqhele ngamamitha nje ukusuka kwelinye lamapaki amakhulu amadolobha, iLa Carolina.I-loft inokukhanya okuningi kwemvelo, okuyenza ibe yindawo ethokomele. Sinenqubomgomo yokucwasa engu-0, futhi sinobungani be-LGBTQ. Kukhona ukuphepha kwamahora angama-24.
Yonke i-loft isetshenziselwa izivakashi. Yindawo evulekile enamafasitela amakhulu futhi ibukeka kahle idolobha.Umhlobiso ungowesimanje futhi uyasebenza. Sithemba ukudala indawo enethezekile, kokubili ukuhlala isikhathi esifushane neside.
4.89 out of 5 stars from 385 reviews
4.89 · 385 okushiwo abanye
Indawo imaphakathi, futhi iqukethe izindawo zokudlela eziningi, izindawo zokudlela, nezitolo zokudlela. Kunenxanxathela yezitolo ezinkulu ezingu-3 ebangeni elifushane, ngisho namathiyetha amamuvi ebangeni lokuhamba ngezinyawo.Siseduze nelinye lamapaki amakhulu edolobha, iLa Carolina, elivame ukubizwa ngokuthi iCentral Park yaseQuito.Lapha, ungathatha uhambo, uqashe ibhayisikili noma ihhashi, futhi uqashe ngisho nesikebhe sokugwedla echibini lepaki.Kukhona nezinketho zokuzijabulisa zasebusuku ezimbalwa eduze, futhi njengoba zingekho emgwaqweni ofanayo, azibangeli noma yikuphi ukungakhululeki ngenxa yomsindo noma abantu.
Sihlala emaphethelweni edolobha, futhi sinikeze izivakashi ukuzimela ngokuhlala kwazo, noma kunjalo silalela kakhulu izidingo zakho, futhi singafinyelelwa ngombhalo noma ngocingo. Uma kunesidingo singafika efulethini cishe imizuzu engama-20.
Sihlala emaphethelweni edolobha, futhi sinikeze izivakashi ukuzimela ngokuhlala kwazo, noma kunjalo silalela kakhulu izidingo zakho, futhi singafinyelelwa ngombhalo noma ngocingo.…
USilvania Ungumbungazi ovelele